MAXKAMADAA OO XUKUN KU SOO RIDAY NINKII DILAY SHAQAALIHII MSF - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MAXKAMADAA OO XUKUN KU SOO RIDAY NINKII DILAY SHAQAALIHII MSF
30.05.2012 | Gobolka Shabeelaha Hoose, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, Qeybta Guud, Taakulada Soomaalida
Dhakhaatiirta aan huduuda laheen (MSF) waxaa lagu wargeliyay in Axmad Salaad Farey, oo ah shaqaala hore oo MSF ka tirsanaa, in lagu helay dambi ah ah dilka laba ka mid ah shaqalaheena Dr. Karel Keiluhu, oo loo yaqaana Kace, iyo
Phillipe Havet taariikhdu marka ay aheed Disembar 29, sanadka 2011 ka, iyagoo shaqadooda ku guda jira. Axmad waxaa lagu xukumay xabsi mudo 30 sana ah.
MSF, hay’ad ahaan kama qeyb qaadanin dacwadda, wax cadaadis ahna masaarin nidaamka sharciga ah ee dacwadan dhamaan qeybaheedi kala duwanaa.
Xukuna waxaa uu yahay qeyb ka mid ah samirka qoysaska iyo asxaabta saaxiibadeen la dilay. MSF waxey cambaareyneysaa dhamaan rabshada ama hanjabaad ka dhan ah shaqaalaheeda
Ka dib dilalkaas, MSF waxaa ay xaaladda ku qasabtay in ay soo afjarto dhamaan howlihii ay ka waday degmada Hodan ee caasimadda, iyadoo ay ka mid yihiin xiridda 2 xarumood oo leh 120 sariir kuwaas oo lagu daaweyn jiray
nafaqa darada, jadeecada iyo shubanka. Ka hor inta aan la xirin xarumahaas, MSF waxaa ay caawin jirtay ilaa 200,000 oo qof oo Soomaali ah oo ku sugan degmada Hodan kuwaas oo ku soo caray caasimadda. Xaaladda amaanka oo sii xumaaneysa awadeed MSF waxaa ay xirtay mashruucdyada qaar ee ay Soomaaliya ku leehdahay waxaana ay dalka ka saartay shaqaalaha caalamiga ah.
Bishii Oktobar sanadkii 2011ka, 2 ka mid ah shaqaalaha MSF , Montserrat Serra iyo Blanca Thiebaut, ayaa lagu afduubay xerada qaxootiga ee Dhadhaab oo ku taala Woqooyiga Kiinya iyagoo Soomaalida halkaa ku sugan siinaya gar gaar deg deg ah. Ilaa hadda waa la haystaa. MSF waxaa ay si ku meel gaar ah u joojisay furidda mashruuc cusub oo aan deg deg ahayn ilaa gabdhahaas laga sii daynaya.
MSF waxay ugu yeereysaa dhamaan Soomaalida; jaaliyadaha, madaxda bulshada iyo gaar ahaan maamulada ka taliya goobaha shaqaalaheeda afduuban lagu haysto, in ay sameeyaan wax walbo oo ay awoodaan si gabdhahaas loogu soo
siidaayo sida ugu dhakhsiya badan iyago bad qaba, iyo in adkeeyo amaanka xarumaha caafimaad ee MSF iyo shaqalaheeda.
Tags: Lower shabelle region, MSF, Somalia, South Central Somalia
Qoraalada kale ee ku saabsan Gobolka Shabeelaha Hoose, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF oo xirtey mashruuceedii caafimaadka ee degaanka Xaawo Cabdi iyada oo mar kale xaqiijineysa in ay taageereyso dadka Soomaaliyeed
MSF oo ku baaqdey in la ixtiraamo dhexdhexaadnimada goobaha caafimaadka